Maxaa laga yiri heshiiskii laga gaaray qalalaasihii Muqdisho? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa laga yiri heshiiskii laga gaaray qalalaasihii Muqdisho?
Si weyn ayaa loo soo dhaweeyay heshiiska laga garaay xiisadihii ka taagnaa Magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay, waxaana Ra’iisul Wasaare Rooble lagu booriyay dadaallada uu wado.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kadib markii la soo saaray heshiis ka kooban 10 qodan oo ay gaareen guddigii farsamada ee loo xil saaray qalalaasihii ka dhashay muddo kororsiga, isla markaana ay goob joog ka ahaayeen Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Midowga musharaxiinta, ayaa si isku mid ah loo soo dhaweeyay waxaana RW Rooble, lagu taageeray howsha uu hayo.
Madaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyo Siyaasiyiin kale oo ay ka mid yihiin labada Xildhibaan ee Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Odawaa, ayaa qoraallo ay qoreen ku soo dhaweeyay heshiiska.
“Waxaan soo dhaweynahaa heshiiska laga gaaray rabshadihii ka dhashay muddo kordhintii sharci darrada ahayd, anigoo codkayga ku biirinaya in ciidamada qalabka sida ee geesiyayaasha aan marna la siyaasadeyn oo ay ku laabtaan xarumahoodii.” Ayuu yiri Madaxweyne Sheekh Shariif.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna yiri, “Waxaan bogaadinayaa dadaallada Ra’iisul Wasaaraha ee xal u helidda xiisadda ka dhalatay muddo kororsigii sharci darrada ahaa. Dhammaan qeybaha ka duwan ee bulshada iyo saaxiibada Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ay Ra’iisul Wasaare Rooble ku garab istaagaan hirgelinta doorasho xor ah oo dalkeena ka dhacda”.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir CC Warsame, ayaa isna yiri, “Waxaan bogaadinayaa heshiiska maanta laga gaaray xiisadii ka dhalatay muddo kororsigii fashilmay. Kalsooni ayaan ku qabaa adkaysiga geedi socodka nabada iyo dhismaha dawladnimada Soomaaliya. Mahad Alle ayaa leh, kaddibna Shacabka Soomaaliyeed iyo intii hor istaagtay muddo kororsiga”.
Inta badan Siyaasiyiinta Soomaalida ayaa soo dhaweysay heshiiskaan, waxaana labada dhinac lagu booriyay tanaasulka ay sameeyeen, waxaana si buxda loo taageeray in ciidamada Militariga ah ilaa caawa laga saaro magaalada Muqdisho.